AOKA IZAO REHETRA MBA HALALAZA NY GAMES mahafinaritra
Peripheraly gaming tsara indrindra 2020& 2021 ho an'ny mpilalao manerantany
Meetup Gaming Peripherals
Ny tanjon'i Meetion dia ny hanomezana fahafaham-po ireo mpanjifantsika sy mpilalao manerantany amin'ny kalitao avo lenta sy azo antoka mba hahazoana antoka fa ny mpanjifa sy ny mpilalao rehetra dia afaka mahazo aina sy matoky amin'ny peripheral gaming antsika amin'ny fampiharana azy ireo. Ny totozy sy ny kitendry gaming an'i Meetion, na ny peripheraly gaming hafa dia nahitana betsaka ny fampiharana azy ireo teny an-tsena noho ny toetrany mahafinaritra. Manana endri-javatra maro izy ireo izay manome antoka ny fampalaza azy ireo sy ny fampiharana azy.
Momba ny fihaonana
Hatramin'ny niorenany, ny "Fampiroboroboana ny famolavolana ny siansa sy ny vokatra teknolojia, hampitombo ny fanavaozana ny serivisy sy ny serivisy teknolojia" dia filozofian'i Meetion. Andiana famolavolana peripheraly filokana lamaody& hevitra tsy manam-paharoa& kilalao pc sy kalitaon'ny solosaina ambony kalitao& soa aman-tsara no namidy ny kojakoja tamin'io filozofia io.
Herin'ny orinasa peripheraly kilalao tsara indrindra: fananana mpiasa mihoatra ny 200; Faritra fanodinana mihoatra ny 10000㎡; Andalana fivoriambe mandeha ho azy enina feno; Mihoatra ny 10 milina famolavolana tsindrona feno fahendrena feno; Ny peripheraly filokana solosaina sy kojakoja PC dia mivoaka isam-bolana mihoatra ny 800.000 set. Mandalo izahay ary mampihatra mafy ny rafitra fanamarinana kalitao iraisam-pirenena ISO 9001: 2008. Ny vokatra metion rehetra dia mandalo ny fanamarinana iraisam-pirenena CE, FCC, RoHS, ary REACH, sns.
Noho ny laza tsara, ny kalitao tonga lafatra ary ny endrika avo lenta, misy vokatra tsy miovaova aondrana avy any MEETION mankany amin'ireo firenena sy faritra eran'izao tontolo izao; ary koa izahay dia nametraka fifandraisana tsara amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa IT malaza eo an-toerana sy any ivelany.